အင်တာပိုလ်၏ ရဲအဖွဲ့များ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ကဏ္ဍများ ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ | Popular
November 29, 2021 Asian Fame
အင်တာပိုလ်၏ ရဲအဖွဲ့များ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ကဏ္ဍများ ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ဟု နစကထုတ်ပြန်
အင်တာပိုလ်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နစက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းလှိုင် ဦးဆောင်သည့် အဆင့်မြင့်ရဲအရာရှိကြီးများ ပါဝင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တူရကီနိုင်ငံ၊ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် (၈၉) ကြိမ်မြောက် အင်တာပိုလ် အထွေထွေ ညီလာခံ (89thSession of INTERPOL General Assembly) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ရာတွင် အင်တာပိုလ်၏ ရဲအဖွဲ့များ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကဏ္ဍများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးတွင် ရဲတပ်ဖွ့ဲများအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍများ ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု နစကက သတင်းတစ်ရပ်ထုတ်ပြန်သည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အင်တာပိုလ်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင် ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် ၁၂ နေရာကို လျှိဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်းတိုတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုလည်း ဖော်ပြသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ရဲချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းလှိုင်သည် အင်တာပိုလ် ညီလာခံ တက်ရောက်စဉ်အတွင်း အင်တာပိုလ်အမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Mr. KIM Jong Yang၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Jurgen Stock တို့ကို သီးခြားတွေ့ဆုံသည့်အပြင် ၂၀၂၂- ၂၀၂၅ လေးနှစ် ရာထူးသက်တမ်းအတွက် အင်တာပိုလ်ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ (UAE) ရဲချုပ် Police Inspector General, H.E. Mr. Ahmed Nasser Al Raisi ကိုလည်းကောင်း၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး HE. Mr.Sergey N. Lebedev၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Nyugen Duy Ngoc တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ရဲအဖွဲ့အကြီးအကဲ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ တော်ဝင်ရဲအဖွဲ့တို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲများနှင့် သီးခြားစီ တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ မှုခင်းများ တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး တို့ နှင့် ပတ်သက်၍ လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုသည်။
(၈၉) ကြိမ်မြောက် အင်တာပိုလ်အထွေထွေညီလာခံသို့ အင်တာပိုလ်အဖွဲ့ဝင် ၁၉၄ နိုင်ငံအနက် ၁၆၉ နိုင်ငံတို့မှ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ရဲအဖွဲ့ကြီးအကဲများဦးဆောင်သည့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ အင်တာပိုလ်မှ အမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Mr. KIM Jong Yang ၊ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူးချုပ် Mr. Jurgen Stock နှင့် အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ နိုင်ငံတကာ မှုခင်းတိုက်ဖျက် ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟုသိရသည်။
အင္တာပိုလ္၏ ရဲအဖြဲ႕မ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္က႑မ်ား ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဟု နစကထုတ္ျပန္
အင္တာပိုလ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ နစက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းလွိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တူရကီနိုင္ငံ၊ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳတြင္ နိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပသည့္ (၈၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အင္တာပိုလ္ အေထြေထြ ညီလာခံ (89thSession of INTERPOL General Assembly) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ အင္တာပိုလ္၏ ရဲအဖြဲ႕မ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ မွုခင္းတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုက႑မ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္နိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည္ဟု နစကက သတင္းတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္သည္။
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ အင္တာပိုလ္အလုပ္အမွုေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒသဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ေနရာကို လၽွိဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ခန႔္အပ္ျခင္းတိုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းလွိုင္သည္ အင္တာပိုလ္ ညီလာခံ တက္ေရာက္စဥ္အတြင္း အင္တာပိုလ္အမွုေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ Mr. KIM Jong Yang၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ Mr. Jurgen Stock တိုကို သီးျခားေတြ႕ဆုံသည့္အျပင္ ၂၀၂၂- ၂၀၂၅ ေလးႏွစ္ ရာထူးသက္တမ္းအတြက္ အင္တာပိုလ္ဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ (UAE) ရဲခ်ဳပ္ Police Inspector General, H.E. Mr. Ahmed Nasser Al Raisi ကိုလည္းေကာင္း၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး HE. Mr.Sergey N. Lebedev၊ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး H.E. Nyugen Duy Ngoc တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ရဲအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ေတာ္ဝင္ရဲအဖြဲ႕တို႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံကာ ႏွစ္နိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မွုခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ျမႇင့္တင္ေရး တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆိုသည္။
(၈၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အင္တာပိုလ္အေထြေထြညီလာခံသို႔ အင္တာပိုလ္အဖြဲဝင္ ၁၉၄ နိုင္ငံအနက္ ၁၆၉ နိုင္ငံတို႔မွ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရဲအဖြဲ႕ႀကီးအကဲမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အင္တာပိုလ္မွ အမွုေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ Mr. KIM Jong Yang ၊ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွူးခ်ဳပ္ Mr. Jurgen Stock ႏွင့္ အမွုေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား နိုင္ငံတကာ မွုခင္းတိုက္ဖ်က္ ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။
ရန်ကုန်လှိုင်တွင်ပေါက်ကွဲမှု အမှိုက်ကောက်သူတစ်ဦးလက်ပြတ်သွားပြီး သွားစစ်စဉ်ထပ်မံပေါက်ကွဲ၍ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးအပါအဝင်ရဲအချို့ဒဏ်ရာရ
ဆောက်လုပ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီး(ဟောင်း)အပါအဝင် ငါးယောက်ကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တာဝန်နဲ့နာရေးကိစ္စတွေအပ နေအိမ်ပြင်ပသွားလာခွင့်မပြု